Baarlamaanka federaalka oo dalbaday xukuumaddu in ay hor-keento qorshaheeda hawleed oo dalka. – Radio Daljir
Abriil 6, 2013 9:29 b 0
Muqdisho, Apr 06 – Fadhi ay maanta iskugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka ayaa looga dooday arrimo la xiriira la xisaabtamidda xukuumadda R/wasaarea Cabdi Faarax Shirdoon.
Fadhiga oo uu shir guddoominayey ku-xigeenka labaad ee afhayeen baarlamaanka Soomaaliya, ayey wakiilladu xoogga ku saareen in ay xukuumaddu degdeg uga soo jawaabto soo jeedintii hore ee baarlamaanka, taasoo ahayd dawladdi in ay ku horkeento qorshaha ay ku hawlgalayso xilligeeda cimri.
Mudanayaasha ayaa R/wasaaraha iyo golihiisa ku dhaliilay in ka gaabiyeen soo gudbinta qorshahooda si looga hubiyo wuxuu xambaarsan yahay, loona ogaado ku habboonaantiisa shaqada dawladda laga dhawrayo.
Dood dheer kaddib, R/wasaaraha ayaa golaha ka codsaday in wakhtig dheeraad ah loogu talo xilligii soo gudbinta qorshaha, looguna simo illaa 20-ka bishaan aynu ku guda jirno ee April, taasoo markii dambana ay wakiilladu aqbaleen, waxaana xilligaasi dawladda laga sugayaa golaha in ay horgayso qorshaheeda wax qabad ee soo socda.
Shirka Kismaayo oo galay wejigii sadexaad ( Dhegayso)